Sambava: Niteraka savorovoro ny fahatongavan’ny OMDA, ka nitokona ireo mpanao asa amin'ny Studio
jeudi, 22 novembre 2018 19:43
Niombon-kevitra tsy misy handoa ny vola 360 000 ariary (1.800.000 fmg), izay notakiana amin'ny tsirairay ireto mpanao asa amin’ny studio ireto. Tsy mazava amin’izy ireo ny fomba handoavana io vola io sady tsy ahazoana taratasy na rosia fanamarinana fandoavana rahateo.
Nisy ny voaantso tany amin’ny Polisy fa tsotra ny nambaran’izy ireo fa tsy hoe malaina ny handoa OMDA io, fa mitaky ny mangaraharaha izahay, ahoana no hahafahanay handeha handoa OMDA alefa amin’ny Orange Money araka ny nambaran’ity iraka ity, farafaharatsiny mba misy tapakila na mba any amin’ny Tahirimbolam-panjakana fa tsy takiana aminay fotsiny tahaka izao.
Raha nanontaniana ny teo anivon'ny Polisim-pirenena, dia nanazava ny lefitry ny Commissaire eto Sambava, Atoa Jean De Dieu, fa misy fitoriana tonga aty aminay avy tamin’ity Agent Percepteur ny OMDA Antsiranana ity, ary ity ny Ordre de mission Ref 18-1256/DIR/OMDA tamin’ny daty 13 novambra 2018, ary procuration N.17 1240/DIR/OMDA du 31 octobre 2017 .
Amin'ny fomba ahoana ny fitakiany izany vola izany amin’ireo mpiasa any amin’ny studio mpanao gravage, hoy hatrany ny lefitry ny Commissaire fa hoezahina halamina haingana izao raharaha izao mba hisian'ny filaminana. amin’ny tanàna.